Cilmi-baarista amniga internetka 2021: Hay'aduhu waxay dhayalsadeen halista weerarka internetka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Cilmi-baarista amniga internetka 2021: Hay'aduhu waxay dhayalsadeen halista weerarka internetka
Summada Amniga Skybox (PRNewsfoto/Skybox Security)
Silsiladda sahayda iyo khatarta cid saddexaad ayaa khatar weyn ku ah tignoolajiyada shaqaynaysa
- Kalsoonida xad-dhaafka ah waxay saadaalisaa jebinta mustaqbalka: 73% CIO-yada iyo CISOs “aad bay ugu kalsoon yihiin” inaysan la kulmi doonin jebinta Axdiga Hore sanadka soo socda
- Nabadgelyada internetka ayaa wali ah fikir danbeCaymiska Cyber ​​waxaa loo arkaa xal ku filan 40%
- Kakanaanta waxay kordhisaa khatarta: 78% jawaab bixiyaasha ayaa caqabad ku noqday kakanaanta iibiyeyaasha badan
Daraasad cusub oo cilmi baaris ah Amniga Skybox waxa la ogaaday in 83% ururada ay la kulmeen jabin xaga tignoolajiyada hawlgalka ah (OT) 36 bilood ee ka horeeyay. Cilmi-baaristu waxay sidoo kale daaha ka qaaday in ururradu ay yareeyaan halista weerar internet-ka, iyadoo 73% CIO-yada iyo CISO-yadu "aad ugu kalsoon yihiin" ururradoodu aysan la kulmi doonin jebinta Axdiga Hore sanadka soo socda.
"Ma aha oo kaliya shirkaduhu waxay ku tiirsan yihiin OT, dadwaynaha guud ahaan waxay ku tiirsan yihiin tignoolajiyadan adeegyada muhiimka ah oo ay ku jiraan tamarta iyo biyaha. Nasiib darro, dambiilayaasha internetka ayaa dhamaantood aad uga warqaba in amniga kaabayaasha muhiimka ah uu guud ahaan daciif yahay. Natiijo ahaan, jilayaasha hanjabaada waxay aaminsan yihiin in weerarrada ransomware ee OT ay aad ugu dhowdahay inay wax bixiyaan," ayuu yidhi Maamulaha Amniga Skybox iyo aasaasaha Gidi Cohen. "Sida sharku ugu faa'iidaysto naxariis la'aanta, weerarrada ransomware waxay sii wadi doonaan ka faa'iidaysiga dayacanka Axdiga Hore ilaa inta waxqabad la'aantu sii jirto."
Cilmi-baarista cusub, Khatarta amniga internetka ee tignoolajiyada hawlgalka ayaa si weyn loo dhayalsaday, waxa ay daaha ka qaaday dagaalka sare ee ammaanka Axdiga Hore soo food saaray – oo ka kooban kakanaanta shabakadda, siloos shaqaynaysa, khatarta silsiladda sahayda, iyo fursadaha hagaajinta nuglaanta oo xaddidan. Jilayaasha khatarta ahi waxay uga faa'iidaystaan ​​daciifnimada Axdiga Hore siyaalo aan khatar ku ahayn shirkado gaar ah - laakiin khatar gelinaya caafimaadka dadweynaha, badbaadada, iyo dhaqaalaha.
Qodobbada muhiimka ah ee laga soo qaatay daraasadda 2021 waxaa ka mid ah:
Ururadu waxay dhayalsadaan khatarta weerarka internetka
83 boqolkiiba dhammaan jawaab bixiyaasha waxay "aad ugu kalsoon yihiin" ururkoodu inuusan la kulmi doonin jebinta Axdiga Hore sanadka soo socda. Hase yeeshee, 36% ayaa sidoo kale sheegay in ay haysteen ugu yaraan hal jebin amniga Axdigii Hore XNUMXkii bilood ee ka horreeyay. In kasta oo ay muhiimad gaar ah leeyihiin xarumahan, hab-dhaqanka ammaanku inta badan waa daciif ama ma jiraan.
CISO waxay kala goysaa aragtida iyo xaqiiqada
37 boqolkiiba CIO-yada iyo CISO-yadu waxay aad ugu kalsoon yihiin in nidaamkooda amniga Axdiga Hore aan la jebin doonin sanadka soo socda. Marka la barbar dhigo XNUMX% kaliya ee maamulayaasha dhirta, kuwaas oo leh waayo-aragnimada ugu horraysa ee saamaynta weerarrada. Halka qaar ay diidaan inay rumaystaan ​​in nidaamyadooda Axdiga Hore ay u nugul yihiin, qaar kalena waxay yiraahdeen jebinta soo socota waa gees geeskeeda.
U hoggaansanaantu ma sinna ammaanka
Ilaa hadda, heerarka u hoggaansanaantu waxay caddeeyeen inaysan ku filnayn ka hortagga shilalka amniga. Joogteynta u hoggaansanaanta xeerarka iyo shuruudaha ayaa ahayd welwelka ugu badan ee dhammaan jawaab-bixiyeyaasha. Shuruudaha u hoggaansanaanta sharciga ayaa sii wadi doona inay kordhaan marka la eego weerarradii dhowaan lagu qaaday kaabayaasha muhiimka ah.
Kakanaanta waxay kordhisaa khatarta amniga
Boqolkiiba 39 ayaa sheegay in kakanaanta ay ugu wacan tahay tignoolajiyada iibiyeyaasha badan ay caqabad ku tahay sugidda deegaankooda Axdiga Hore. Intaa waxaa dheer, XNUMX% dhammaan jawaab bixiyaasha ayaa sheegay in caqabada ugu sareysa ee hagaajinta barnaamijyada amniga ay tahay go'aamo lagu gaaro qaybo ganacsi oo gaar ah oo aan lahayn kormeer dhexe.
Caymiska mas'uuliyadda internetka qaar baa u arka mid ku filan
XNUMX boqolkiiba jawaab bixiyaasha ayaa sheegay in caymiska mas'uuliyadda internetka loo arko xal ku filan. Si kastaba ha ahaatee, caymiska mas'uuliyadda internetka ma daboolo "ganacsiga lumay" ee ka yimaada weerarka ransomware, kaas oo ah mid ka mid ah saddexda walaac ee ugu sarreeya ee jawaab-bixiyeyaasha sahanka.
Daah-furnaanta iyo falanqaynta dariiqa ayaa ah mudnaanta ugu sarreysa amniga internetka
48 boqolkiiba CISOs iyo CIOs waxay yiraahdeen awood la'aanta in lagu sameeyo falanqaynta dariiqa deegaanka oo dhan si loo fahmo soo-gaadhista dhabta ah waa mid ka mid ah saddexda walaac ee amni ee ugu sarreeya. Intaa waxaa dheer, CISOs iyo CIOs waxay yiraahdeen naqshadaha kala duwan ee OT iyo bay'ada IT (40%) iyo isku dhafka tignoolajiyada IT-ga (XNUMX%) waa laba ka mid ah saddexda khatarood ee ugu waaweyn ee amniga.
Silos shaqayntu waxay horseedaa hab-nololeedka iyo kakanaanta tignoolajiyada
CIOs, CISOs, Architects, Engineers, and Plant Managers dhamaantood waxay liis gareeyaan silos shaqaynaya oo ka mid ah caqabadaha ugu sareeya ee sugidda kaabayaasha Axdiga Hore. Maareynta amniga OT waa ciyaar kooxeed. Haddii xubnaha kooxdu ay isticmaalayaan buugaag-ciyaaraha kala duwan, uma badna inay wada guulaystaan.
Silsiladda sahayda iyo khatarta dhinac saddexaad waa khatar weyn
Boqolkiiba 46 ka mid ah jawaab bixiyaasha ayaa sheegay in silsiladda sahayda/helitaanka qolo saddexaad ee shabakadda ay tahay mid ka mid ah saddexda khataraha ugu sarreeya ee amniga. Hase yeeshee, kaliya XNUMX% ayaa sheegay ururkooda sidii siyaasad gelitaanka qolo saddexaad oo codsatay OT.